बुलबुल नेपाल | आइपीएलः सन्दीपको टिममा गांगुली सल्लाहकार, उपाधि जित्ला दिल्ली?
सोमबार १३, जेठ २०७६ १५:५५
आइपीएलः सन्दीपको टिममा गांगुली सल्लाहकार, उपाधि जित्ला दिल्ली?
काठमाडौं, फागुन ३० । भारतीय क्रिकेट टिमको सफलतामा महत्वपूर्ण योगदान दिने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली यो संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) मा फरक भूमिकामा देख्न पाइने भएको छ । उनी यो पटक नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आवद्ध दिल्ली क्यापिटल्समा सल्लाहकारको भूमिकामा देख्न पाइने भएको हो ।
उनलाई बुधबार दिल्लीले सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ । गांगुलीले यो नयाँ भूमिकामा दिल्लीका प्रशिक्षक तथा पूर्व अस्ट्रेलियन कप्तान रिकी पोन्टिङसँग मिलेर टिमका लागि रणनीति तयार गर्ने छन् । दिल्लीसँग जोड्न पाउँदा उनले खुसी व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘म दिल्लीसँग जोडिन पाउँदा निकै खुसी छु । साथै, खेलाडी र टिमका स्टाफसँग काम गर्दा रमाइलो हुनेछ ।’
यसअघि, कोलकाता नाइटराइडर्स र पूणे वारियर्सको कप्तानी सम्हाली सकेका गांगुलीको आगमनले के दिल्लीले यो पटक आइपीएलको उपाधि जित्ला? यो प्रश्नको जवाफ त आगामी दिनमा पाइने नै छ । यो संस्करणमा दिल्लीले आफ्नो नाम (क्यापिटल्स) र जर्सी परिर्वतन गरेको छ ।
साथै, १२औं संस्करणमा शिखर धवन पनि सनराइजर्स हैदराबादलार्ई छोड्दै आफ्नो घरेलु टिम दिल्लीमा जोडिएका छन् । यो पटक पनि टिमको कप्तानी युवा खेलाडी श्रेयस अय्यरले गर्ने छन् । दिल्लीको पहिलो खेल २४ मार्चमा बुम्बई इन्डियन्सविरुद्ध वानखडे रंगशालामा हुनेछ ।
Tags : ##Sourav Ganguly #Delhi capitals